कम उमेरमै रजश्वला हुन थाले किशोरी - Everest Dainik - News from Nepal
कम उमेरमै रजश्वला हुन थाले किशोरी
गृह मन्त्रालयमा कार्यरत महिमा शर्माकी छोरी विनिता अहिले एघार वर्षकी भइन । विनिता अहिले कक्षा ६ मा पढ्दैछिन । दशै फुलपातीको दिन विनिता रजस्वला भइन । पहिलो पटक रजस्वला भएपछि उनी रुन थालिन ।
उनले कसैलाई यो कुरा बताउन सकिनन् । पछि उनका साथी मार्फत आमा महिमाले थाहा पाइन । उनले वितिनालाई सम्झाइन, यो समान्य क्रिया हो । सबै महिलालाई हुन्छ आत्तिनु पर्दैन । महिमालाई छोरी यति चाडै रजस्वला होलिन भन्ने सोचेकी नै थिइनन् । त्यसैले उनले यस बिषयमा पहिले नै विनितालाई आवश्यक जानकारी दिन पाइनन् । महिमा भन्छिन, म १७ वर्षमा महिनावारी भएकी थिएँ । छोरी यति चाडै होलिन भन्ने त सोचेकै थिइन ।
महिमा मात्र नभएर वाग्मती नर्सरीकी संचालिका भावी रावल पनि १२ वर्ष नपुग्नै नातिनीको रजस्वला सुरु भएपछि अचम्म परिन । यति कम उमेरमै महिनावारी सुरु होला भन्ने कसैलाई थिएन । उनले भनिन, जमाना बदलिसकेको छ । यी दुई त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन । अहिले किशोरीहरुको महीनावारी हुने उमेर घट्दै गइरहेको छ । पहिले पहिले पन्ध्र सोह्र वर्षमा महिनावारी हुन्थे । अचेल यो उमेर निरन्तर घट्दै गैरहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस महिनावारी हुँदा बग्ने रगतको रङ्गले के सङ्केत गर्छ ?
तर अहिले शारीरिक स्वस्थ्यता, पोषणयुक्त खानालगायतका कारण दश एघार वर्षमै किशोरीहरु महिनावारी हुन थालेका छन । त्यसैले आठ नौ वर्ष कै उमेरमै आमाबाबुले छोरीहरूलाई महिनावारी हुँदा ध्यान दिनु पर्ने कुरा बताउनु आवश्यक भइसकेको छ । स्त्री रोग विज्ञ डा. मिना झाका अनुसार महिनावारी हुने उमेर घट्दै जानु आफैमा समस्या त होइन । तर यसका बिषयमा किशोरीमा प्रयाप्त जानकारी नभएपछि महिनावारी नै समस्या र तनाव बन्न सक्छ ।
महिनावारी हुँदा रगत किन आउँछ ?
हरेक महिनामा एक पटक किसोरीहरुको योनीबाट रगत बग्छ । पेट दुख्छ । यस्तो पहिलो पटक हुदा किसोरी अचम्म पर्छन । अस्तिसम्म पिसाबमात्र आउने योनीबाट रगत आएपछि आत्तिन्छन । उनीहरु यो कुरा सबैलाई भन्न चाहँदैनन । कोही कोही त मानसिक तनावमा समेत हुन्छन । त्यसैले यस बेला उनीहरूलाई महिनावारीका विषयमा सही सूचना दिनु पर्छ । महिनावारी भन्नाले नामैले हरेक महिना घट्ने घट्ना । यो समान्य शारीरिक प्रकृया हो । यो महिलाको यौनांग पूर्ण रुपमा विकास भएको संकेत हो ।